Technology - Aajako Nepali Khabar
अक्टोपसको अचम्मको हात | Interesting Facts About Octopus and Technology
शल्यक्रिया गर्दा ठूलो प्वाल पार्नुको सट्टा सानो प्वाल पारेरै उपचार गर्न सकियोस्‌ भनेर रोबोटका इन्जिनियरहरूले डाक्टरहरूलाई सजिलो हुने उपकरणहरू विकास गर्दै छन्‌। यस क्षेत्रको एउटा आविष्कार अक्टोपसको एकदमै लचिलो हातबाट [ … ]
बीबीसी । “आजका स्मार्टफोनको क्यामेराले बीस वर्ष अगाडि झन्डै ८ हजार डलर हालेर किनेको वास्तविक क्यामराभन्दा राम्रा तस्बिरहरु निकाल्छ,” अकल्यान्डस्थित प्रोफेसनल फोटोग्राफर टम आङ भन्छन् । अहिले हाम्रा स्मार्टफोनमा जडान [ … ]
अनलाइन कक्षाका फाइदा र बेफाइदा
को#रोना भा#इरसको बढ्दो संक्र#मणलाई ध्यानमा राख्दै, बच्चाहरूको लागि अनलाइन कक्षा धेरै महिनादेखि जारी रहेको छ। ताकी तालिमका कारण बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुँदैन। बच्चाहरू घरमा उनीहरूको अभिभावकको मोबाइल, डेस्कटप वा ल्यापटपबाट [ … ]
के हो क्लच प्लेट ? मोटरसाइकलको क्लचप्लेट कसरी जोगाउने ? यस्ता छन् उपाय यसरी जोगाउनुस् क्लचप्लेट
नेपालमा बाइक किन्नु र चलाउनु पछिल्लो समय कुनै नौलो विषय होइन् । सामान्यदेखि महँगा बाइक बजारमा पाइन्छन् । नेपालमा बाइक पैसा,उमेर र भूगाेल अनुसार छनाैट हुने गर्छ । हिमाल,पहाड तथा [ … ]
admin - February 7, 2021 February 7, 2021
स्पेसएक्स, टेस्लाजस्ता कम्पनीका मालिक एलन मस्कले अबको एक वर्षभित्र मानिसको दिमागमा राखिने कम्प्युटर चिप तयार पारिने र प्रत्यारोपण बताएका छन् । यसको अर्थ चिपमार्फत अब व्यक्तिको दिमाग सोझै कम्प्युटरसँग जोडिनेछ [ … ]
admin - February 6, 2021 February 6, 2021
काठमाडौ । विज्ञानले पत्ता लगाएको छ की हाम्रो सौर्यमण्डलदेखि सबैभन्दा नजिक अर्को सौर्यमण्डल ‘अल्फा सेन्टुरी सिस्टम’ हो। यस सिस्टममा तीनवटा तारा छन् (अल्फा सेन्टुरी ए, अल्फा सेंटरी बी र अल्फा [ … ]
महिनामा लाख कमाउने सरकारबाट निःशुल्क सीप सिक्न चाहानेका लागि सुनौलो अवसर -सम्पर्क नम्बरसहित
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) राष्ट्रिय सीप परीक्षण समितिले सीप परीक्षण सञ्चालन हुने सम्बन्धी जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ । सुचनामा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सीप परीक्षण [ … ]
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा समस्या आएको छ । फेसबुक अन्तगर्तका म्यासेन्जर इन्टाग्राम र फेसबुकमा समस्या आएको हो । म्यासेन्जरमा सन्देश पठाउँदा इन्टरेट कनेक्शन नभएको बताउने अथवा सन्देश जान ढिलो [ … ]
एजेन्सी | कार कम्पनी रोल्स रोयसले ४ सय किलोमिटर प्रति घन्टाको दरमा उड्न सक्ने ट्याक्सी बनाउने भएको छ । २०२० भन्दा पहिलेनै यो ट्याक्सी लन्च गर्ने तयारी गरिएको छ । [ … ]
आगो तथा हिटरको प्रयोग झ्याल ढोका बन्द गरी ताप्नु , स्वास्थयको लागि हानिकारक
आगो तथा हिटरको प्रयोग | अहिले केहिदिन देखिएता चिसो ह्वातै बढेको छ । चिसोबाट जोगिन धेरै मानिसले न्यानोका लागि विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्छन् । आगो ताप्दा वा हिटर चलाउदा झ्याल ढोका [ … ]